PressReader - Isolezwe: 2017-09-15 - ‘Ngeke kuphazamiseke ukufunda ezikoleni okumiswe kuzo othisha’
‘Ngeke kuphazamiseke ukufunda ezikoleni okumiswe kuzo othisha’
NGEKE kuphazamiseke ukufunda nokufundisa ezikoleni okumiswe kuzo othisha abayisithupha KwaZuluNatal –abahlanu kubo ababhekene namacala athinta ukuya ocansini nabafundi noyedwa obhekene necala lokushaya umfundi ngenduku – ngoba bakhona abazobabambela.
Lokhu kushiwo nguMnuz Kwazi Mthethwa okhulumela uNgqongqoshe wezeMfundo eKZN, uMnuz Mthandeni Dlungwane, othe uma kumiswa othisha kulethwa abanye abazobamba isikhashana ngesikhathi kusaqhubeka uphenyo.
“Asazi ukuthi uphenyo luzothatha isikhathi esingakanani ngoba othisha kabaphenywa nguMnyango wezeMfundo kuphela kodwa baphenywa nangamaphoyisa njengoba abanye sebevelile nasenkantolo. Esingakusho njengamanje wukuthi ukufunda nokufundisa kuyaqhubeka ezikoleni ezithintekayo futhi nabafundi abathikamezekile batholelwe usizo abaludingayo,” kusho uMthethwa.
Udonse ngendlebe othisha abashaya izingane yize induku yavalwa eminyakeni ewu-20 edlule ngokuthi bawuyeke lo mkhuba.
“Uthisha oshaya izingane uyazixosha ngoba kade yavalwa induku. Siyabacela othisha bawuyeke lo mkhuba, bafundise izingane kuthi uma kukhona abanganeme ngakho bathole ezinye izindlela zokujezisa izingane, hhayi ukuzishaya,” kusho uMthethwa.
Inhlangano elwela amalungelo ezingane, i-World Vision South Africa ithe othisha abahlukumeza izingane ngokocansi baphinde bazishaye mabaphucwe iziqu zabo futhi bafakwe ohlwini lwezigilamkhuba ukuze bangaphinde basondele ezinganeni.
UNksz Paula Barnard we-World Vision South Africa uthe kubaphethe kabi ukuthi othisha okufanele ngabe bavikela izingane yibona abalala nazo baphinde bazishaye kabuhlungu.
Uthe lo mkhuba udlange KwaZulu-Natal naseKuruman, eNorthern Cape, lapho ukujola kothisha nabafundi kuyinto ejwayelekile.
Uphinde waveza ukuthi banomkhankaso obizwa nge-It Takes a World to End Violence Against Children abagqugquzela ngawo amalungu omphakathi ukuthi angathuli uma kuxhashazwa izingane, zihlukunyezwa ngokocansi noma zishushumbiswa.
“Siyala nomkhuba wokuthwala lapho izingane zishadiswa namakhehla eLesotho, Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe naseSwaziland. Sifuna izingane ziphephe kuzo zonke izindawo ezikuzo, kusukela esikoleni, emphakathini nasemakhaya.”